Mulkiilaha Dawladda, MW Maqaarsaar ah, Dirhamka UAE iyo Diinaarka Qater yaa na xukuma?!! Yaab!! | Muqdisho Online
Home Af Soomaali Mulkiilaha Dawladda, MW Maqaarsaar ah, Dirhamka UAE iyo Diinaarka Qater yaa na...
Mulkiilaha Dawladda, MW Maqaarsaar ah, Dirhamka UAE iyo Diinaarka Qater yaa na xukuma?!! Yaab!!
Kadib markii ay garoonka soo caga dhigatay dayuuraddii siday lacagtii kadib Imaraadka ee la qabsaday ayaa waxaa telefoon u soo dhacay Taliyaha Xogga dalka Jen. Gorod oo ay Safiirka imaaraadka Maxamed Cusman VIPda ku wada sugayeen lacagta.
Waxaa uu ahaa qorsho la isla ogaa kadib waxaa taliyihii la baxay telfoonkiisii, hasa yeeshee waa ka dhuuntay safiirka kadib markii lamar lagu siiyey inuu meesha ka soo tago. Safiirka waxaa uu aaday dhinaca dayuradda waxaasa uu arkay ciidanka Nabadaugidda oo dayuuradda raba inay fuulaan maadaama ay qorshaha safiirka ka qarsoon ay qeyb ka ahaayeen. Safiirka oo khabaar moog ah ayaa is yiri u sheeg inaysan sidaas ahayn oo dayuuraddaan tahay mid gaar ah oo Xeyndaabka dibolomasiyadda ku jirtaa. Hasa ciidankiisii iyo isagaba qoryo amaanku furan yahay ayaa loola baxay.
Safiirka oo ay talo ku caddaatay ayaa wacay RW Kheyre hasa yeeshee cidi kama qaban telefoonka, awalna telefoonkisa waxaa uu lahaan jiray texgelin gaar ah. Waxaa uu haddana wacay wasirka Amniga waa loo qabtay. Waxbuu dareemay waxaa wasiirka Aminiga Ducale Islow uu safiirka codsaday in laga laga waco telefoon kale waa qabtay, hasa yeeshee markii loo sheegay inuu safiirka Imaaraadka uu rabo ayuu yiri waqti uma hayo anigaa soo wici doona waana iska dhigay. Safiirka oo waaga ku baryey ayaa fasaxay in dayuuradda sidaas lagu galo.
Kadib waxaa uu la xiriiray madaxdiisa Abu Dhabi waxaa Farmajo la soo hadlay mas’uul ka tirsan sirdoonka dibadda ee Imaaraadka, hasa yeeshee MW Farmajo oo caan ku ah is moogeysiinta ayaa maya iyo Ma ogida u cuskaday mas’uul kii soo wacay UAE, wuxusa u sheegay inuu wax ka qaban doono. MW Farmajo oo isbuufinaya ayaa wacay kheyre, has yeeshee waxaa u yimid Fahad Yasiin oo u sheegay inuu faraha kala baxo arrintaan oo uu iyaga u daayo. Oday Farmaajo ayaa is xanaajiyey oo mirif lagu yiri, hasa yeeshee waxaa uu Fahad yiri “ Farmajo Qeylida dhaaf ee halkaaga fadhi annagaa ku keennay berrina waa kaa qaadeynaa haddaan damacno”. Waana laga dhaqaaqay.
Maxaa harry oo la isku haystaa?
MW Farmajo intii uu xafiiska ka dhigtay Xaruunta wasaaradda Gashaandhigga waxaa uu xiriir hoose la sameynayey dalka Imaaraadka waxaana hawshaas waday La taliyaha Madaxweynaha Dhinaca Ammaanka Cabdisaciid Muse. Fahad iyo Kheyre arrinkaan lama socon oo waxay ku mashquul ahaayeen sidii Jawaari loo legdi lahaa. Waxaan la sheegay in MW ay dhowr jeer is arkeen saraakiil sirdoonka Imaaraadka lacagtanna waxaa loo soo diray odayga xoogaagan lacagta ah inuu hormaris ka dhigto oo uu iskaga daardaariyo meelaha ay dhaxanta ka soo galeyso ka hor inta uusan aadin shirka carabta ee Sacuudiga halkaas oo uu kula kulmi doono dhaxal sugaha imaaraadka Maxamed Bin Zayed (MbZ) iyadoo MW Farmajana laga rabo inuu Barlamaanka u celiyo heshiiskii Berbera ee DP World oo tuuristiisa laga noqdo, isagana uu meermeeriyo ee uusan saxeexin si uusan sharci u noqon, waana ku joogaa oo waa didan yahay iuu saxeexo.
Dagaalka Jawaari yey Dani ugu jirtay?
Dagaalka Jawaari lagu qaaday waxaa uu dan u ahaa Kheyre iyo Fahad oo ka ordayey In Xukuumadda Mooshin laga keeno iyo Farmajo oo rabay In Jawaari baxo si uu heshiiska ugu celin karo Barlamaanka, kadib marka la keeno guddoomiye ama hawsha ku cusub ama mid maqaarsaar ah oo qalinka laga haysto. Inkastoo oday Jawaari uu si Sharaf badan ku tagay waxaa u kulmay labadaas jug.Waxaa la yirininkey ku hartey hawli haysaa.
Kooxo is diidan
Waxaa sameysmay kooxo is diidan oo dugsanaya dalal shisheeye oo dano kala duwan naga leh. Dirhamka Imaaraadka iyo Diinaarka Qatar ayaa loo adeegsan yahay. Fahad iyo Kheyre oo middi dhabrka ka geliyey saaxibkood Tabit ayaa Qadariyiintu xageeda u janjeera walow Kheyre yahay iska raac. Farmajo oo u eg inuu dib u helay hadalka oo ka maqnaa muddo ayaa hadda leh koox uu Cabdisiciid hogaamiyo waana halka ay hadda ciyaartu joogto.
Waxaan la ogeyn cidda is reereebka xiga lagu legdi doono, iyadoo uu jawaari si xarfad iyo waddanimo leh uga dhex baxay. Qorshuhu wuxuu ahaa In codeynta Barlamanka ee guddoomiyaha ah gacan taag laga dhigo iyo In la sameeyo sharci kale oo ah inaan ansixinta Barlamaanka aan loo marin heshiisyada ay xukuumadda dalalka shisheeye la gasho, sida kan Berbera, Kana Soo socda ee SOMA OIL and GAS, kan Qater GAS. Hasa yeshee jawaari waa ka tahay inta aan wax lagu dheelin.
Taliye Gorod, Wasiir Mursal iyo UAE
Taliyihii ciidanka Jenearaal Gorod oo Axadii laga soo eryey garoonka dayuuradaha ayaa maanta leh lacagta waan ogaa laakiin tirada Ma ogeyn. Haddii lacagta uu ogaa taliyaha ciidanka maxay dowladda u qabsatay lacagta misa yaa dawlad ah? Ma Fahad iyo Kheyre oo yiri lacagtan waxaa laga soo sarrifay Dirham ee Diinaar lagama soo sarifin marka waan ku dhegnay, misa odey Farmajo oo xoogaagii laga leexsaday oo amus loogu daray?
Wasiirkii Gaashaandhigga Mursal ayaa isgana leh heshiiskii Imaaraadka waa ka baxnay oo ciidankeenna annaga ayaa mushaar siisaneyna hadda kadib. MW waxaa uu Fahad ku canaantay maxaa noogu sheegi weysay inaad UAE la hadasho oo ay lacagtaan aad nooga qarisay?
Haddaba yaa dalkan hogaamiya? Ma Fahad, Kheyre iyo Mursal? Misa Farmajo iyo Cabdisaciid oo Gorod oo oday dhaqameed isu qibleeyey laga soo celiyey lagana dhigay taliyaha Xoogga Dalka walina aan ogeyn cidda uu u shaqeeyo iyo awooddo jagadiisa. Waayo Taliyihii Ciidanka Xogga dalka Somaliyeed ayaa u yimid lacag mushaahar ciidankiisa lagu sheegay, horayna u sii ogaa ayaa ciyaal yaryar ka bursadeen!! MW ayaa inta loo tagay indhaha laga galay!
Intaan oo is huwan halka u dambeysa waa la arki doonaa.
Previous articleSomalia defense minister Declares End To UAE Military Pact As Diplomatic Row Deepens
Next articleMaxamed Sh Cusman Jawaari oo Dalka u Tanasulay, muxuusa Ka yiri wixii dhacay!!
Mahad - February 14, 2018
Mogadisho: Car bomb hits Security Checkpoint near Mogadishu
Mahad - February 19, 2018
Guddiyada Maaliyadda iyo Ganacsiga ee Baarlamaanka oo sharci darro ka dhigay...
[Akhriso Xeer Hoosaadka BJFS] Waa maxay sababta ka danbeysa in Jawaari...